जापान कैंची: प्रोफेशनल हेयरड्रेसिंग कैंची र नाई कतराहरू
कपाल काट्ने कैंची र नाई कातरहरू
आज बिक्रीमा लोकप्रिय हेयरड्रेसिङ सिजर ब्रान्डहरू ब्राउज गर्नुहोस्! लाइफटाइम वारेन्टी, नि:शुल्क ढुवानी र व्यावसायिक र घर-उपयोगका लागि छुट मूल्यहरू।
सर्वश्रेष्ठ बेच्ने कैंची कपाल कैंची सेटहरू
प्रोफेशनल कपाल कात्ती
Ichiro पेस्टल गुलाबी कपाल काट्ने कैंची
सिजर ब्रान्डहरू बारे जान्नुहोस्
श्रेणी अनुसार पसल कैंची
कपाल काट्ने कैंची कपाल पातलो कैंची बायाँ ह्यान्ड्ड क्यान्सरहरू HAIRDRESSING SETS & KITS स्टाइलि / / शेभिंग रेजरहरू एक्सेसरीस र केसहरू
आकार बाट कैंची पसल
". "" कैंची आकारहरू ". "" कैंची आकारहरू ". "" कैंची आकारहरू ". "" कैंची आकारहरू ". "" कैंची आकारहरू ". "" कैंची आकारहरू
कैंची सहायक उपकरण, होलस्टरहरू र केसहरू
पेशेवर कपाल कैंचीहरू खरीद गर्दा, तपाईंलाई मद्दत गर्न र तिनीहरूलाई सुरक्षाको लागि सही सामानहरू चाहिन्छ। छाला holsters, कैंची केस र पाउच, रखरखाव किट र उपकरण किटहरू जापान कैंचीमा उपलब्ध छन्।
तपाईं हेयरड्रेसि sc कैंची केसहरू र पाउचहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको शैलीसँग मिल्दछ र तपाईंको कतराहरूलाई सुरक्षा दिन्छ!
कपाल कस्सर होलस्टरहरू प्रामाणिक छालाबाट बनेको हुन्छ जुन तपाईंको कपालका कतीहरू सम्म लामो हुन्छ।
कैंची सहायक उपकरण
कपाल कपाल कहाँ खरीद गर्ने?
अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा लोकप्रिय हेयरड्रेसिंग सिंची स्टोर कपाल काट्ने र पातलो पात्रोको लागि पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईं अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, युरोप, बेलायत र एशियामा हेयरड्रेसि sc क्यान्सरहरू अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
हेयरड्रेसिंगका लागि कैंची अनौठो किसिमले कपाल काट्नको लागि बनाईन्छ।
यसको साथ तनावमुक्त कैंची अर्डरहरू:
- सजिलो day दिन फर्काउँछ
- लाइफटाइम वारेन्टी
- व्यावसायिक गुणवत्ता
सेफ अनलाइन हेयर कैंचीहरू कसरी खरीद गर्ने
जापान कैंचीले सुरक्षित र सुरक्षित अनलाइन भुक्तानी विकल्पहरू समावेश गर्दछ: पेपैल, अफरपे, ZipPay, सेजल र क्रेडिट कार्डहरू।
खोज्नुहोस् सजिलो प्रतिफल, आजीवन वारंटी र पेशेवर कैंची ब्रान्ड: Jaguar, Joewell, जान्तेत्सु, Ichiro, Yasaka र Kamisori कैंची
जब तपाईं जापान कैंचीबाट हेयरड्रेसि or वा बार्बरिंग क्यायरहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं अर्डर हुनुहुन्छ कुनै पनि नि: शुल्क संसारमा!
अष्ट्रेलिया पोष्ट, जापान पोष्ट, यूपीएस वा फेडेक्स अन्तर्राष्ट्रिय।
तपाईंको कपाल काट्ने वा पातलो क्यान्सरहरू तपाईंको ढोकामा आइपुग्नुहोस् हप्तामा होइन!
कपाल कपाल वा नाई कैंची भनेको के हो?
कपाल काट्नु भनेको कुनै खास साधारण कैंची जस्तो हुँदैन जसको विशेष गरी कपाल काट्नको लागि बनाईएको हुन्छ।
कपाल कपाल बनाउनका लागि प्रयोग गरिने स्टेनलेस स्टील कपाल काट्नको लागि विशिष्ट रूपमा कठोर पारिएको हुन्छ।
अफसेट एर्गोनोमिक्स विशेष गरी बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो कपाल काट्ने कैंची कपाल काट्ने हरेक दिन को लागी अधिक आरामदायक।
हेयरड्रेसि sc कैंची र नाई कतराहरू यी प्रकारहरूमा आउँदछन्:
लामो ब्लेड, छोटो ब्लेड, काट्ने, ब्लन्ट काट्ने, पातलो, बनावट गर्ने, उत्तल धार र बेभल एज सिंची।
बेस्ट कपाल क्यान्सरहरू
प्रायः जसो सोधिने प्रश्न: कपाल कात्ने कपालको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
जब किन्नको लागि हेर्दै कपाल कपाल, नाई कतराहरू र रेजरहरू अनलाइन, यो विशाल ब्रान्ड, शैली र उपलब्ध छनौटहरूको ठूलो संख्याको साथ भारी हुन सक्छ।
हाम्रो ग्राहक प्रतिक्रियाहरू र बेलुकाको बर्षको आधारमा, हामीले यसका बारे सोधिने प्रश्नहरूको सूची राख्ने निर्णय गरेका छौं हेयरड्रेसि and र नाई कैंची!
केश कपालका विभिन्न प्रकारका के हुन्?
चाहे अनलाइन वा भण्डारमा किनमेल गरोस्, हेयरड्रेसि sc कैंचीको सही आकार छनौट गर्नुहोस् जुन दुबै आरामदायक हो र सबै काट्ने प्रविधिहरूको लागि काम गर्दछ।
थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
यहाँ हामी उपलब्ध हेयरड्रेसि sc क्यान्सरका विभिन्न प्रकारका वर्णन गर्दछौं।
बाल कटाउने कैंची: कपाल काट्ने कपालहरू सबैभन्दा मौलिक र आधारभूत ट्रिमिंग उपकरणहरू हुन् जुन तपाईं कुनै पनि नाई पसल वा सैलुनमा देख्न सक्नुहुनेछ। यो ईलि गर्न प्रयोग कतै कटाई को एक सीधा जोडी होminaअतिरिक्त स्टाइलिंगको लागि te लम्बाई। सैलून वरिपरिको बिभिन्न चीजहरू काट्न पनि त्यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, DIY ब्यूटीशियनहरूको लागि, केश कटाउने कपालको एक जोडी प्राप्त गर्न प्रमुख उपकरण हो। केश कटाउने कपालको केही जोडीको लागि खोजी गर्ने हेयरड्रेसरहरूले पनि यस प्रकारको मद्दत मिल्नेछ।
Texturizing कैंची: अर्को व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको कपाल काट्ने उपकरण टेक्चरराइज कपालहरू हो। यीसँग कैंची जस्तो योजना रहेको छ, तर एउटा तीखो किनारमा दाँत छन् जुन कपालमा हिर्काउँछ। यसमा to देखि १7दाँत हुन्छ र एक असामान्य प्रकारको कतराहरूको बारेमा सोच्दछ। यो मौलिक eli बिना गहिरो कपाल खतरनाक को लागी प्रयोग गरीन्छminaटिंग लम्बाई।
कुंडा कैंची: कुंडा कतराहरू, फेरि, ग्राहकको सबै चौकामा दबाब कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो कार्पल पैसेज डिसअर्डर र थकाऊ तनाव घाउको अनुभव गर्नेहरूका लागि उपयुक्त छ। एक पछि अर्को भेट्टाइएको औंला खोलेको बिभिन्न कैंचीसँग भिन्न, पालो कपालहरूमा छेउमा पिभोटि thumb औंठा खोल्ने हुन्छ। प्राय: जसो नभई, औंठी बढी सीमित र लाभदायक र अधिक विशेषता विकासको लागि प्लट गरिएको छ।
पातलो कैंची: पातलो कैंची नियमित रूपले टेक्स्चराइजिंग कैंचीको साथ व्यापार गरिन्छ, एक वैकल्पिक उपकरणको बाबजुद। त्यस्तो होइन जस्तो सामान्य रूपमा दाँत गरिएको दाँत सहित टेक्चरराइज क्यान्सर, कम कतराहरूको दाँत दाँत हुन्छ। यो eli को उपयोग छminate ভর जबकि केहि कैंची द्वारा बनाईएको रूपरेखा रेखा संग मिक्स।
लामो नाई ब्लेड कैंची: लामो ब्लेड कात्री आवश्यक ट्रिमिंग उपकरणहरू हुन्, यद्यपि लामो काट्ने किनारहरूको साथ। यो एकै पटकमा अधिक कपाल छाँटका लागि प्रयोग गरिन्छ, जुन सैलून र हेयरड्रेसरको लागि समान हुन्छ। यी कैंची सामान्यतया to देखि .6. inches इन्च लम्बाईका हुन्छन् र ब्रश विधिका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो ग्रुफ काट्ने विधिहरूको लागि उस्तै उस्तै हो किनकि यो एक पटकमा क्लिप हुन्छ।
छोटो केश कपाल ब्लेड: छोटो ब्लेडेड ट्रिमिंग क्यान्सरहरू ब्यूटीशियनहरूले बढी हल्का हातहरूसँग प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन् किनकि तिनीहरू अधिक हल्का हुन्छन् र राम्रो नियन्त्रण दिन्छन्, फलस्वरूप हात थकाइ कम हुँदै जान्छ। छोटो ब्लेड कपाल कैंची frequently "4..5.5" आकारमा बारम्बार पहुँचयोग्य हुन्छन्। यो आइटमाइज गर्ने र काट्नेको लागि उचित छ, यसलाई ब्यूटीशियनहरू माझ आवश्यक बनाउँछ।
बायाँ हाते कैंची: अन्तिम अझै कम्तिमा होइन, त्यहाँ बाँया कैद क्यान्सरहरू छन्। यी परम्परागत भन्दा दायाँ-बाट विभिन्न ह्यान्डल डिजाइनहरूको साथ योजनाबद्ध छन्। ह्यान्डलहरू सरल र अधिक लाभदायक काटनेको लागि बाँया हातको अनुरूप गठन गरिन्छ।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: केश कपालका विभिन्न प्रकारहरू उपलब्ध छन्, यहाँ!
मलाई के आकार कपाल कात्नाहरू आवश्यक छ?
कुन कैंची साइजले तपाईंलाई उत्तम सूट गर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले केश कटाउने प्रविधिको प्रदर्शन गर्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ।
त्यहाँ दुई मुख्य हेयरड्रेसिंग र बार्बरिंग सिंची आकारहरू छन्:
सानो कैंची: यी सामान्यतया 4.5. "" इन्च र .5.5..XNUMX "इन्चको बीच हुन्छन्। सानो कात्रीको छोटो ब्लेड हुन्छ जसले कपाल काट्दा तपाईंलाई थप शुद्धता दिन्छ।
अब कैंची : यी सामान्यतया "" इन्च र "" इन्चको बीच हुन्छन्। लामो कैंचीमा ठूला ब्लेडहरू हुन्छन्, सामान्यतया Comb टेकनिक भन्दा बढी, र कपाल छिटो ट्रिमिंग को लागी उपयोगी छ।
केश कपाल, नाई, कपाल, र घरमा कपाल काट्नको लागि प्रयोग गरिएको सबैभन्दा सामान्य सिजा आकार "हो।
"" इन्च आकार सही लम्बाइ हो जुन तपाइँलाई लगभग सबै बाल कटाउने र स्टाइलिंग टेकनीक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
यसको प्रकाशमा, तपाईंको लागि सही कैंची छनौट गर्दा हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंको केन्द्र औंला बिरुद्द किनारको लम्बाई र तपाईंको हातको हत्केलाको बिरुद्दमा क्यान्सरको पूरा लम्बाइ अनुमान गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरै जसो कैंचीहरूले कटौतीको विस्तृत दायरा कवर गर्दछ "to. to" देखि "सम्म।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: यहाँ साइज द्वारा हेयरड्रेसि sc कैंची कसरी छनौट गर्ने!
घरमा कपाल काट्नका लागि कुन कैंची उत्तम हुन्छ?
शुरुआती र मान्छेहरूलाई घरमा कपाल काट्न खोज्दै, कैंचीको जोडी खोज्नु जुन तपाईंको आवश्यकतालाई मिल्दछ एक चुनौतीपूर्ण काम हुन सक्छ।
घरमा कपाल काट्न तपाईंलाई कस्तो प्रकारको कैंची चाहिन्छ? काँटी काट्ने एक साधारण जोडी जुन स्टेनलेस स्टील प्रयोग गर्दछ र एक धारदार फ्ल्याट-एज, बेवल वा कन्भेक्स एज ब्लेड उत्तम छनोट हो।
घरमा कपाल काट्नको लागि तपाईंले $ 500 खर्च गर्नु पर्दैन! हामीले घरमा कपाल काट्नका लागि उत्तम कैंचीको सूची सँगै राख्यौं।
(सर्वश्रेष्ठ घर-प्रयोग कैंची) Umi कपाल काट्ने कैंची
(सर्वश्रेष्ठ घर-प्रयोग सिची सेट) कालातीत कटौती र पातलो सेट
Jaguar जे २ कपाल काट्ने सिंची
Mina म्याट कालो काट्ने कैंची
Jaguar गुलाबी पूर्व शैली ईगो
सकुरा काट्ने र पातलो सेट
Mina परम्परागत कालो कैंची सेट
Ichiro काटिएको कैंची आराम गर्नुहोस्
Mina नाई कैंची
हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यदि हामीले तपाईंको कुनै पनि मनपर्ने गृह-प्रयोग गरिएको कपाल क्यान्सर छुटायौं भने!
को बारे मा पढ्नुहोस्: घरमा कपाल कटाई को लागी उत्तम कैंची!
सबै भन्दा राम्रो कपाल कैंची ब्रान्ड के हो?
चाहे तपाईं अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा वा यूरोपमा हुनुहुन्छ, उत्तम हेयरड्रेसि sc कैंची ब्राण्डहरू सामान्यतया जापानबाट वा जर्मनी.
के कपाल कैंची को एक राम्रो ब्रान्ड बनाउँछ? शीर्ष कारक सँधै प्रतिष्ठा हो, किनकि यो निर्धारण गर्दछ कि तपाईं कत्ति भरपर्दो हुन सक्नुहुनेछ जब कैंची अनलाइन खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। उत्तम ब्रान्डले उच्च-गुणवत्तायुक्त सामग्री, तीखो किनारहरू प्रयोग गर्दछ जुन कपाल काट्नको लागि उपयुक्त छ, र प्रयोगको धेरै वर्षसम्म टिकाउ छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यहाँ पेशेवरहरू वा घर-प्रयोगको लागि उत्तम १० कपाल कात्री ब्रान्डहरू छन्।
(सर्वश्रेष्ठ मूल्य जापानी)Yasaka कैंची
(उत्तम गुणस्तर र मान) जंटेत्सु कैंची
(सर्वश्रेष्ठ जर्मन) Jaguar कैंची
(सर्वश्रेष्ठ अनौंठो डिजाईन) Kamisori भेडाहरू
(उच्चतम गुणवत्ता) Fuji MoreZ कैंची
(सर्वश्रेष्ठ सबै राउन्ड) Joewell कैंची
(सर्वश्रेष्ठ मूल्य निर्धारण) Ichiro कैंची
(उत्तम शुरुआत र गृह-प्रयोग) Mina कैंची
Feather कैंची र रेजर
हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यदि केश कपालका केशहरू, नाई, हेयरस्टाइलिस्टहरू, शुरुवातकर्ताहरू र प्रशिक्षुहरू वा गृह-प्रयोगको लागि हामीले तपाईंलाई मनपर्ने कुनै ब्रान्ड हेयरड्रेसि sc कैंची हरायौं भने।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: यहाँ उत्तम कपाल कैंची र ब्रान्डहरू छन्!
के तपाईं आफ्नो कपाल सामान्य कैंचीले काट्न सक्नुहुन्छ?
नियमित कैंची र हेयरड्रेसि sc कैंची बीचको मुख्य परिवर्तनहरू ब्लेडको आकार हुन्।
यदि तपाईंसँग भान्छाको क्यांचीको एक जोडी छ भने, ब्लेडहरू धेरै ठूला र फराकिला छन् किनकि तिनीहरू च्यात्ने र स्लाइस नबनाई बनेका हुन्छन्।
कपाल काट्ने कपाल स्पष्ट रूपमा कपाल मार्फत स्लाइस गर्नका लागि लक्षित हुन्छन्, र यसलाई अझ राम्रो र पातलो ब्लेड किनारा आवश्यक छ।
नियमित कैंची र कपाल कैंची संग भिन्नता ह्यान्डल संग पनि छ र काट्ने क्रममा कसरी तपाईंको हात स्थित छ।
भान्सा, फेब्रिक र शिल्प कैंचीसँग धेरै ओभरसाइज ह्यान्डलहरू हुन्छन् किनकि तपाईंले काट्न र च्यात्नुको लागि अधिक शक्ति राख्नु पर्छ। कपालमा क्यान्सरको सानो ह्यान्डल हुन्छ किनकि तीब्र ब्लेडहरू कपालबाट सहजै काटिन्छ।
ब्लेडको साथ, कैंचीमा पनि नियमित र कपालको क्यान्सरको बिच तीब्रतामा ठूलो भिन्नता हुन्छ।
काटिएको कपालको क्यान्सरको राम्रो ब्लेड हुन्छ जसले नाजुक स्लाइस गर्दछ, जबकि नियमित कैंची जस्तो भान्छाको कपालको धारिलो दाँतको किनारहरू हुन्छन् जुन मासु र तरकारीहरू मार्नका लागि बनाइएको हुन्छ।
तपाईं सामान्य क्यान्सर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तिनीहरू एकदम छिटो छ तथापि प्राय जसो तीतो छैन यो सजिलै तपाईंको कपाल मोर्नुको विपरीत यसको ट्रिमिंग र कति कपाल तपाईंले छाँटकाँट गर्दै हुनुहुन्छ यसमा निर्भर गर्दछ कि सुस्त कैंचीले केही समय लिन सक्दछ।
घरमा कैंची प्रयोग गर्दा होशियार रहनुहोस्, र आफैंलाई छाँटकाँट गर्न र आफ्नो कपाललाई आराम नदिने प्रयास गर्नुहोस्।
कैंची चाँडै सुस्त हुन्छ, र यसले क्षति लिन वा ब्लेडलाई ब्लान्ट गर्न कागजातलाई कम्ती बनाउँदैन।
तपाईको कपाललाई स्ट्याण्डर्ड कैंचीले छाँटकाँट गर्दा, ती कागज, कार्डबोर्ड, बनावट जस्ता चीजहरू काटनेका लागि सामान्यतया प्रयोग हुने गर्दछ, यसले तपाईंको कपालको बन्दरलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ र तिनीहरूलाई भाग दिन सक्छ। तिनीहरू सामान्यतया स्टाइल कतराहरू जत्तिकै तीखो हुँदैनन् त्यसैले ट्रिमिंग गर्नु अघि उनीहरूको कपाल धेरै।
कैंचीले सिधा काट्नु पनि यस्तै चुनौतीपूर्ण छ। किनकी किनार तीव्र छैन, तपाईं तिनीहरूलाई कुचो रूपमा तिनीहरू वास्तव मा किनार को सुझावहरु को लागी कपाल बाहिर धक्का को लागी प्रत्येक कपाल ठीक ट्रिमिंग को विपरीत जहाँ तपाईं को लागी गरीएको छ।
परिणाम केशको अन्त्य हो, र सुझावहरू बिग्रिएका, विभाजित र रघे। नियमित कात्रीले तपाईको कपाल बिगारे पछि तपाईले आफ्नो कपाल ठीक गर्न सलुन वा कपालमा जानु पर्छ।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: जब तपाईं यहाँ नियमित वा सामान्य कैंचीको साथ आफ्नो कपाल काट्छन् के हुन्छ!
कपाल किन कती महँगो छ?
कपाल कात्री, र अन्य सबै कपाल वा नाई कतराहरू, कपाल काट्ने र स्टाइलिंगको लागि सही ब्लेड उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने सामग्री (इस्पात) को कारण महँगो हुन्छ।
कपाल कैंचीले प्रीमियम स्टेनलेस स्टील प्रयोग गर्दछ किनकि यो मात्र सामग्री हो कि कपाल काट्नको लागि राम्रो ब्लेड पर्याप्त धारण गर्दछ।
१०० भन्दा कम सस्तो कपालको क्यान्सरले सस्तो इस्पात प्रयोग गर्दछ जसले तपाईंको कपाललाई आँसु पार्छ र क्षति पुर्‍याउँछ किनभने कटाईको किनार कपालको कपाल वा बारबरिंगका लागि लगभग त्यति तीव्र छैन।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: Wहाई कपाल कैंची यति महँगो छ!
म कसरी मेरो कपालको क्यान्सर कायम राख्न र तीखाउने गर्छु?
कपाल कैंची कामको लागि वा घर मा सुख्खा हुँदा प्रयोग गर्नको लागि होईन। एक सभ्य गुणस्तर कैंची तेल प्रति हप्ता एक पटक कपाल कैंची तेल। यसले तपाईंको क्यान्सरले कपाल राम्रोसँग काट्नेछ, तिनीहरूलाई खिया लाग्नबाट रोक्दछ र ती बढि बर्षहरूमा लाग्छ।
तपाईंको कपाल र हजाम कात्रीहरू दिनको अन्त्यतिर सफा गर्नुपर्छ, राम्ररी सुकाइन्छ र त्यसपछि ती तेलहरू राख्नु अघि तेल लगाउनु पर्छ।
न्यानो पानीको प्रयोग गरी भिजाउन, कुन्नु र आफ्नो कपालको कात्लाहरू धुनुहोस्, र कुनै पनि मलबे वा निर्माण-प्रक्रियाको राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् र स्क्रब गर्नुहोस्, त्यसपछि तिनीहरूलाई सुख्खा गर्नुहोस्।
दुई ब्लेडहरूका बीचमा सुकाएपछि कपालको क्यान्सरमा तेल लगाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सम्झन कोशिस गर्नुहोस् कि धेरै महँगो कैंचीहरू हुन्छन्, तिनीहरू त्यति कमजोर र भंगुर हुन्छन्।
कपालको क्यान्सरको धार धारमा राख्न, तिनीहरूसँग कडा इस्पात हुनुपर्दछ, र कडा स्टील कडा छ, शारीरिक क्षतिको कारण तिनीहरू क्र्याक गर्न सजिलो छ।
अल्ट्रा राम्रो किनाराको साथ कैंची फ्लोर वा हार्ड सतहहरूमा उनीहरूलाई झार्दै सजिलो हुन्छ। अधिकांश हेयरड्रेसरहरू, हेयर स्टाइलिस्टहरू, नाईहरू र ब्यूटीशियनहरूले उनीहरूको महँगो कैंचीलाई बचाउन पाउच, केस, होल्स्टर वा कैंची वालेट प्रयोग गर्दछ।
क्षय (जंग) वा शारीरिक क्षतिबाट कुनै पनि क्षति रोक्नको लागि पाउच वा केसमा निरन्तर सुक्खा र सुरक्षित राख्नुहोस्।
तपाईको कपालमा कपाल कस्सरलाई बेगमा राख्नुहोस् वा असुरक्षित पर्समा पर्नुहोस्। सबैभन्दा सामान्य तरीकाले कैंची क्षतिग्रस्त छ बैगमा मामूली शारीरिक क्षतिको कारण हो।
सफा र कोरिसो कोरिसकेपछि, ब्लेडहरूमा काट्ने तेलको केही बूँद राख्नुहोस्।
ह्यान्डलबाट कैंची समात्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाइँको कपाल कैंची प्रयोग गर्दा तपाइँका हातहरू सुक्खा राख्न पक्का गर्नुहोस्।
ग्राहकले कपाल धोइसकेपछि छाँट्न वा कटाउन सुरु गर्नुहोस्। सफा कपालको मतलब तपाईको क्यान्सरमा पर्नको लागि कम सामानहरू।
शारीरिक क्षतिबाट जोगिन लगातार स्ट्यान्ड वा सुरक्षित ठाउँमा कैंची राख्नुहोस्।
क्यान्सर र कुनै पनि बाँकी मलबे सफा गर्न ब्रश वा कागज तौलिया प्रयोग गर्नुहोस्।
कागज वा कपाल बाहेक अरू कुनै पनि सामग्री ट्रिम नगर्नुहोस् ताकि काटनेको किनारहरूको होनिंग हराउने छैन।
कपाल छाँटकाँट गर्दा प्रभावी रूपमा कैंची प्रयोग गर्नुहोस्।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: हेयरस्प्रेसिंग कैंची देखभाल र मर्मत यहाँ!
कपाल कपाल र नाई कैंचीको लागि तपाईं कति तिर्नुहुन्छ?
धेरै कैंची ब्रान्डहरू, मोडेलहरू र नयाँ स्टाइलहरू हरेक बर्ष आउँदछन्, हेयरड्रेसरहरू र नाईहरूले कतीको लागि तिर्ने आशा गर्छन्?
कपालको लागि कपाल कस्ने र नाईँहरूले कति तिर्ने भनेर बुझ्न हामी कुन प्रकारको कतराहरू उपलब्ध छन् भनेर जान्नु आवश्यक छ। यसमा समावेश छन्:
काट्ने कैंची $ 100 र $ 500 बीचको छ
पातलो कैंची $ 100 र $ 500 बीचको छ
स्टेनलेस स्टील कैंची $ १०० हो
440० सी स्टिल कांची $ २०० + हो
VG10 इस्पात कैंची $ 300 + हो
कोबाल्ट स्टिल कांची $ 600 + हो
धेरै धेरै ...
नयाँ प्रशिक्षु वा छात्र कपालका कपाल र नाईहरूको लागि, तपाईं एक जोडी वा काट्ने वा पातलो पातलोको लागि $ १०० देखि $ २ between० सम्म तिर्न आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
पेशेवर कपाल र कपालका लागि, तपाईं काट्न वा पातलो पातलो को एक जोडी को लागी $ १ to० देखि $ १००० को बीचमा आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक प्रीमियम जोडी खोज्दै हुनुहुन्छ जुन जीवनभर रहनेछ, तपाईं $ 500 भन्दा बढी तिर्नुहुनेछ!
हाम्रो ब्राउज गर्नुहोस्: यहाँ सर्वश्रेष्ठ नाई कैंची!
द्रुत र सस्तो प्रतिस्थापनको लागि, हेयरड्रेसरहरूले सामान्यतया काट्ने र पातलो कात्रीहरूको लागि $ १ pay० तिर्दछन्।
त्यसोभए जब "केश कटाउने कैंचीलाई तपाईले कति तिर्नुहुन्छ?" भनेर सोधिँदा उनीहरूले $ १०० र $ 100 को बीचमा भुक्तान गर्छन्। यसले तपाइँलाई उच्च गुणस्तरको कपाल कटाई वा पातलो र बनावट बनाउछ।
हाम्रो ब्राउज गर्नुहोस्: यहाँ सर्वश्रेष्ठ बेच्ने कैंची!
हजाम कपाल सामान्यतया लामो हुन्छन् र प्रायः मानिसहरूले अधिक रकम तिर्ने आशा गर्छन्, तर तिनीहरू सामान्यतया सानो केश कपालको रूपमा समान हुन्छन्।
नाई कात्तीको दायरा $ १$० देखि $ between०० बीचको हुन्छ एक कन्ट्री प्रविधिको साथ प्रयोग गर्न सकिने एन्ट्री स्तर प्रोफेशनल कपाल काट्ने सिंचीको लागि।
को बारे मा पढ्नुहोस्: सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु, विद्यार्थी र एन्ट्री-स्तर कैंची!
प्रोफेशनल प्रीमियम बार्बर सिंचीको लागत $ 500 जति हुन्छ र सामान्यतया एक थ्रीडी उत्तल एज ब्लेड, अफसेट एर्गोनोमिक्स र उच्च गुणवत्ता इस्पातको सुविधा प्रस्तुत गर्दछ।
हेयरड्रेसरहरूले एक जोडी पाउने आशा गर्छन् जसले केशलाई सहजै काट्छ, पेशेवर एर्गोनोमिक्स छ र लामो समयसम्म रहन्छ। यी गुणस्तरीय कात्तीहरू जति लामो स्टीलको स्टाइलले लामो हुन्छ।
हेयरड्रेसि sc कैंची कसरी समात्ने
केश अलग गर्ने क्यान्सीहरू राख्ने केही भिन्न शैलीहरू र तरिकाहरू छन्, तर सबै भन्दा साधारण विधि पश्चिमी परम्परागत हो। कपालको क्यान्सर ठीकसँग राख्नुका फाइदाहरू यो हुन् कि तपाईले आफ्नो नाडी र औंलाहरुबाट दबाब हटाउनुहुन्छ, र यसले कपाल काट्ने बेलामा तपाईलाई स्थिर हात पनि दिन्छ।
हेयरड्रेसि sc कैंची समात्न कदमहरू:
सिसाक हुकको साथ माथिल्लो तर्फ छततिर फर्केर, तपाईंको राख्नुहोस् औंला औंला सानो औंला प्वालमा।
तपाइँको औंठा कैंचीको ठूलो औंला प्वालमा राख्नुहोस्।
तपाईंको अनुक्रमणिका र मध्य औंला ह्याण्डलको माथिल्लो भागमा आराम गर्नुपर्दछ
कपाल कैंची खोल्न र बन्द गर्न तपाइँको थम्ब प्रयोग गर्नुहोस्
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: हेयरड्रेसि Hold कैंची कसरी समात्ने!
कैंची मद्दत र लेख
जापान कैंची संयुक्त राज्य अमेरिका: विश्वसनीय कैंची स्टोर!